Tonga Hatraiza ny Kolikoly sy Fanararaotam-pahefana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mongol Mooré Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tonga Hatraiza ny Kolikoly?
Manao kolikoly ny manam-pahefana rehefa manararaotra ny fahefana ananany mba hahazoana tombontsoa. Efa ela izany no nisy. Nasiana lalàna, ohatra, ao amin’ny Baiboly hoe tsy mahazo mandray kolikoly ny mpitsara. (Eksodosy 23:8) Midika izany fa efa 3 500 taona mahery izay no nisian’ny kolikoly. Tsy hoe manaiky handray tsolotra fotsiny anefa ny manam-pahefana. Maka na mampanao zavatra tsy ananany zo koa izy ireo indraindray, na mangalatra volam-panjakana mihitsy aza. Mety hampiasa ny fahefany koa izy mba hiangarana amin’ny namany sy ny havany.
Eo anivon’ny fitondram-panjakana mazàna no tena ahitana kolikoly, na dia mety hisy koa aza izany any amin’ny fikambanana hafa naorin’olombelona. Nanao tatitra ny fikambanana Mangarahara Iraisam-pirenena, tamin’ny 2013, fa ireto dimy ireto no hitan’ny olona maneran-tany hoe tena mpanao kolikoly: Mpanao politika, polisy, mpiasam-panjakana, mpanao lalàna, ary ny fitsarana. Ireto misy ohatra manaporofo an’izany:
AFRIKA: Manam-pahefana 22 000 eo ho eo tatsy Afrika Atsimo no voampanga ho nanao kolikoly, tamin’ny 2013.
AMERIKA ATSIMO: Olona 25 tany Brezila no voaheloka higadra tamin’ny 2012, satria nampiasa volam-panjakana mba hahazoana toerana eo amin’ny fitondrana. Anisan’ireo voaheloka ny lehilahy iray manam-pahefana faharoa ambony indrindra tao amin’ny fitondrana teo aloha.
AZIA: Olona 502 no maty nianjeran’ny tranobe iray fivarotana tany Séoul, any Korea Atsimo, tamin’ny 1995. Hita tamin’ny famotorana fa nomen’ny mpanorina an’ilay trano tsolotra ny manam-pahefana, mba hamela azy ireo tsy hanaraka ny lalàna momba ny aro loza sy hampiasa fitaovana tsy manara-penitra.
EOROPA: Nilaza i Cecilia Malmström, Solontena Misahana ny Raharaha Anatiny ao Amin’ny Vaomiera Eoropeanina hoe “tena mahavariana fa miely be” ny kolikoly any Eoropa. Hoy ihany izy: “Toa ny finiavana hanafoana kolikoly mihitsy no tsy ao amin’ny mpanao politika.”
Efa tena lalim-paka ny kolikoly eo anivon’ny fanjakana. Nilaza i Susan Rose-Ackerman, manam-pahaizana momba ny ady amin’ny kolikoly, fa “ny fomba fiasan’ny fanjakana mihitsy no mila ovana tanteraka”, izay vao mety hihena ny kolikoly. Hoatran’ny hoe tsy hisy mihitsy izany. Milaza anefa ny Baiboly fa hisy fiovana lehibe lavitra noho izay eritreretintsika. Tsy hoe mety hisy fotsiny ilay izy, fa azo antoka mihitsy.